Xukuumadda oo ka hadashay aragtidooda ku wajahan Ciidamo Somaliland ka socda oo loo diro Soomaaliya | Somaliland.Org
Xukuumadda oo ka hadashay aragtidooda ku wajahan Ciidamo Somaliland ka socda oo loo diro Soomaaliya
June 25, 2009	Hargeysa (Somaliland.Org)- Xukuumadda Somaliland ayaa ka hadashay Ciidamo Somaliland leedahay oo loo diro Koonfurta Soomaaliya, waxaanay sheegeen in aanay jirin cid waydiisatay in Ciidamo loo diro halkaas.
Wasiirka Arrimaha Dibedda Somaliland Cabdilaahi Maxamed Ducaale oo maanta Shir-jaraa’id ku qabtay Magaalada Hargeysa, ayaa ka hadlay xaaladda ka taagan Soomaaliya, waxaanu sheegay in waxyaabaha halkaa ka socdaa ay tahay mid murugo leh. Waxaanu ka hadlay aragtidooda Xukuumad ahaan ee in Ciidamo Somaliland ka socda loo diro Koonfurta Soomaaliya. “Waa dhibaato hor leh oo aad iyo aad looga yaqyaqsoodo, waananu maqlaynay dalabka ay u sameeyeen dalalka deriska, taasina waxay u taalaa dalalkaas. Kollay dhib way ka iman kartaa, balse indhahaanu ku haynaa oo cid baa dhulkaa (Koonfurta Soomaaliya) noo joogta, waananu danaynayaa arrimaha ka socda.” Ayuu yidhi Wasiirka Arrimaha Dibeddu. Mar la waydiiyay in ay Xukuumad ahaan Ciidamo u dirayaan Soomaaliya, ayaa wuxuu ku jawaabay oo uu yidhi, “Horta Anaga cidi waxba namay waydiisan, balse arrintaasi waa mid u dhaxaysa Xukuumadda oo u taala oo aan anigu shaqsi ka ahay ama aan ka tirsanahay Golaha Wasiirada.”
Wasiirku wuxuu sheegay in aanay Xukuumad ahaan ka warqabin xadhiga Itoobiya ay xidhay Xuduudaha ay la wadaagto Somaliland oo ay ugu dambaysay Xadka dhinaca Wajaale oo shalay ilaa gabbal-dhacii xidhnayd.